Maxaad ka Ogtahay goorta uu furmayo shirka DF,J.land & P/land, & Xog laga helay? | HOBYOMEDIA
Home WARARKA GALMUDUG Maxaad ka Ogtahay goorta uu furmayo shirka DF,J.land & P/land, & Xog...
Warar lagu kalsoonaan karo oo soo baxaya ayaa sheegaya in saacadaha soo socda ee maanta uu si rasmi ah u furmi doono shirka saddex geesoodka ah ee u dhexeeya dowladda federaalka Somalia, Jubbaland iyo Puntland.
Shirka oo ah mid xasaasi ah ayaa waxaa diirada lagu saarayaa xaaladda siyaasadeed ee dalka, gaar ahaan muranka ka taagan arrimaha doorashooyinka ee 2020 illaa 2021-ka.
Wada-hadallada u dhexeeya saddexdan dhinac ayaa fadhigan kii ka horreeyay u baaqday shuruudo uu soo bandhigay Axmed Madoobe, taas oo keentay dib u dhaca.
Xaaladda siyaasadeed ayaa ah mid cakiran, xilli haatan lagu jiro marxalad adag oo kala guur ah, islamarkaana dalku uusan laheyn Ra’iisul wasaare iyo xukuumad rasmi ah.
Previous articleJabuuti:-Madaxweyne Qoorqoor oo kulan la yeeshay Wasiiro iyo taliyeyaal ciidan
Next articleMadaxweynihii hore ee Galmudug oo walaac ka muujiyay natiijada imtixaankii lagu dhawaaqay